Fidiovana data: torolàlana haingana ho an'ny fanadiovana data / Martech Zone
Ny fanamasinana merge dia asa lehibe iray ho an'ny asa fandraharahana toy ny marketing mailaka mivantana ary fahazoana loharanom-pahamarinana tokana. Na izany aza, maro ireo fikambanana mbola mino fa ny fizotry ny fanamasinana merge dia voafetra fotsiny amin'ny teknikan'ny Excel sy ny fiasa izay tsy dia mahomby loatra amin'ny fanitsiana ireo filàna manatsara ny kalitaon'ny angona.
Ity torolàlana ity dia hanampy ny mpampiasa IT sy ny mpampiasa IT hahatakatra ny fizotry ny fanamasinana merge, ary mety hahatonga azy ireo hahatsapa ny antony tsy ahafahan'ny ekipan'izy ireo manohy manambatra sy manadio intsony amin'ny alàlan'ny Excel.
Andeha isika hanomboka!
Inona no atao hoe fizarana merge na fiasa manadio?
Ny merge purge dia dingan'ny fitondrana loharanom-baovao marobe amin'ny toerana iray, miaraka amin'ny fanesorana ireo firaketana ratsy sy dika mitovy amin'ny loharano.
Ity dia azo faritana amin'ireto ohatra manaraka ireto:
Jereo fa ity sary etsy ambony ity dia manana firaketana telo mitovy amin'ny olana maro mifandraika amin'ny kalitaon'ny data. Rehefa mampiditra fiasa fanadiovana merge ho an'ity firaketana ity dia hovaina ho vokatra madio sy tokana toy ny ohatra etsy ambany:
Rehefa manambatra sy manadio ireo dika mitovy amin'ny loharanom-baovao marobe, ny valiny dia mampiseho kinova fanamafisana ny firaketana voalohany. Tsanganana iray hafa [Indostria] dia nampiana an-tsoratra, nalaina avy amin'ny kinova hafa an-tsoratra.
Ny fivoahan'ny dingan'ny fanadiovana merge dia mamorona firaketana izay misy fampahalalana tokana izay manome ny tanjon'ny data. Amin'ity ohatra etsy ambony ity, aorian'ny fanatsarana azy, ny angon-drakitra dia ho firaketana azo antoka ho an'ny mpivarotra amin'ny fampielezana mailaka.
Fomba fanao tsara indrindra hanangonana data sy fanadiovana
Na inona na inona indostria, orinasa, na haben'ny orinasa, ny fizotran'ireo fanadiovana dia manadio ny tanjon'ny data-drive. Na dia voafetra ho an'ny fampifangaroana sy ny fanafoanana fotsiny aza ny fampiharana, androany ny fampitambarana sy ny fanadiovana dia nanjary mekanika tena ilaina izay ahafahan'ny mpampiasa mamakafaka ny angon-drakitra amin'ny antsipiriany.
Na eo aza ny fizotrany dia mandeha ho azy izao amin'ny alàlan'ny be dia be manambatra rindrambaiko fanadiovana ary fitaovana, ny mpampiasa dia mbola mila mitazona ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny fanadiovana data. Ireto manaraka ireto dia mamporisika anao hanaraka anao:
Mifantoha amin'ny kalitaon'ny data: Alohan'ny hanaovana hetsika fanadiovana merge dia ilaina ny manadio sy manara-penitra ny angon-drakitra, satria manome antoka fa mora kokoa ny fizotry ny fanodinana. Raha manambola ianao nefa tsy nodiovina ny angon-drakitra dia handiso fanantenana anao fotsiny ny valiny.
Mifikitra amin'ny drafitra azo tanterahina: Raha sanatria ka tsy laharam-pahamehana ho anao ny dingana fampitambarana angona tsotra. Manoro hevitra anao ny hametraka drafitra izay hanampy amin'ny fanombanana ny karazana firaketana tadiavinao atambatra sy diovina.
Manatsara ny maodely data anao: Amin'ny ankapobeny, aorian'ny fizotran'ny fanadiovana voalohany, ny orinasa dia mamorona fahatakarana tsara kokoa ny maodely data. Raha vantany vao mivoatra ny fahatakarana mialoha ny maodelinao dia afaka manamboatra KPI ianao ary mampihena ny fotoana laninao amin'ny dingana ankapobeny.
Fitazonana ny firaketana ny lisitra: Ny fanadiovana lisitra dia tsy voatery hamafana tanteraka ny lisitra. Ny rindranasa data merge purge dia ahafahanao mitahiry ireo firaketana ary mitazona tahiry isaky ny fanovana natao tamin'ny lisitra.
Fitazonana loharanom-pahamarinana tokana: Rehefa angona avy amin'ny firaketana maro ny angon-drakitry ny mpampiasa dia miatrika tsy fitoviana noho ny vaovao tsy mitovy. Amin'ity tranga ity, ny fampifangaroana sy ny fanadiovana dia manampy amin'ny famoronana loharano iray an'ny fahamarinana. Anisan'izany ny fampahalalana ilaina rehetra momba ny mpanjifa.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny rindrambaiko fanadiovana ny serivisy ho an'ny tena
Vahaolana mahomby amin'ny famoronana loharanom-pahamarinana tokana ary azonao antoka fa manaraka ny fomba fanao tsara indrindra sisa ianao, dia ny fahazoana rindrambaiko fanadiovana. Fitaovana toy izany dia hanadino ireo firaketana taloha amin'ny alàlan'ny fampahalalana vaovao amin'ny alàlan'ny fizotry ny data.
Ankoatr'izay, ny fitaovana fanadiovan-tena dia afaka ahafahan'ny mpampiasa orinasa manambatra sy manadio ny firaketana ny angon-drakitra nefa tsy ilaina ny fananan'izy ireo fahalalana lalina sy traikefa amin'ny programa.
Ny fitaovana fanadiovana merge tonga lafatra dia afaka manampy ny mpampiasa raharaham-barotra amin'ny:
Fanomanana ny angona amin'ny alàlan'ny fanombanana ny lesoka sy ny tsy fitovizan'ny fampahalalana
Manadio sy manara-dalàna ny angon-drakitra mifanaraka amin'ny fitsipiky ny orinasa voafaritra
Mifanaraka amin'ny lisitra marobe amin'ny alàlan'ny fitambaran'ny algorithma efa napetraka
Fanesorana ireo duplicate miaraka amin'ny taha marina
Mamorona firaketana volamena ary mahazo loharanom-pahamarinana tokana
& maro hafa
Tsy ilaina intsony ny milaza, amin'ny vanim-potoana nanjary nilaina ny mandeha ho azy amin'ny fahombiazan'ny orinasa, ny orinasa dia tsy afaka manemotra ny fanatsarana ny angon-drakitra momba ny orinasa. Noho izany, fitaovana fampitambarana / fanadiovana maoderina no nanjary vahaolana lehibe indrindra amin'ny olan'ny fahanterana mifandraika amin'ny dingana sarotra amin'ny fampifangaroana sy fanadiovana data.
Ny angon-drakitra orinasa dia iray amin'ireo fananany sarobidy indrindra - ary toy ny harena rehetra, ny fitahirizana data. Na dia lasa laser aza ny orinasa mifantoka amin'ny fahazoana fampahalalana mitombo sy manamafy ny fanangonana tahirin-kevitra, ny angon-drakitra azo dia mijanona tsy mijanona ary maka CRM lafo na toerana fitahirizana mandritra ny fotoana maharitra. Amin'ny tranga toy izany dia mila diovina ny data alohan'ny hampiasana azy amin'ny orinasa.
Na izany aza, ny dingana sarotra amin'ny fampifangaroana / fanadiovana dia azo tsorina amin'ny alàlan'ny lozisialy fananganana tokana tokana izay manampy anao hanambatra loharanom-baovao sy hamorona firaketana izay tena sarobidy.
Data Ladder dia orinasan-rindrambaiko manana kalitao momba ny angon-drakitra natokana hanampiana ireo mpampiasa orinasa hahazo tombony betsaka amin'ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny angona, ny fanoratana, ny fanokanana ary ny fitaovana enti-mampitombo. Na mifanaraka amina firaketana an-tapitrisany amin'ny alàlan'ny algorithms mifanandrify fuzzy, na manova ny angona vokatra sarotra amin'ny alàlan'ny haitao semantika, ny fitaovan'ny kalitaon'ny data Ladder dia manome serivisy ambony tsy manam-paharoa amin'ny indostria.
Sintomy Fitsapana Maimaimpoana
Tags: fanadiovana adiresyadiresy geocodingfanamarinana adiresyTakelaka data crmDatafanasokajiana dataserivisy fanadiovana datafampiroboroboana angonafidiovana datatohatra tohatralalao datafamaritana dataangona kalitaofitantanana kalitaon'ny datadatamatchorinasa datamatchfanokananaangon-drakitra orinasaalgorithma mifanentanamanadio purgelalao ny lalaofiraketana firaketanaUnstructured datafanasokajiana data tsy voarindrafanadiovana data tsy voarindra
Javeria Gauhar, mpanoratra B2B / SaaS efa za-draharaha manokana amin'ny fanoratana ho an'ny indostrian'ny fitantanana angona. Ao amin'ny Data Ladder, miasa amin'ny Executive Executive izy, tompon'andraikitra amin'ny fampiharana paikady marketing anatiny. Izy koa dia programmer manana traikefa 2 taona amin'ny fampandrosoana, fitsapana ary fitazonana ny rindranasan'ny lozisialy orinasa.
Karazana horonan-tsary YouTube 10 izay hanampy amin'ny fampivoarana ny orinasanao madinidinika
Maninona no misy mpanao ampinga akondro 542 ao Amazon